Raiisal wasaare Cabi Axmed oo si weyn lagu soo dhaweeyay Eritariya: SAWIRO - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Raiisal wasaare Cabi Axmed oo si weyn lagu soo dhaweeyay Eritariya: SAWIRO
Raiisal wasaare Cabi Axmed ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay Eritariya. Wadooyinka dalkaasi oo dhan ayaa lagu xardhey sawirka Cabi Axmed lagu qorey meelkasta ”soo dhawoow walaal”.
Cabi Axmed ayaa hadda noqonaya badbaadiyaha Eritatiya oo reer galbeedku ku qabteen cunaqabatayn xoogan ayna ugu wacneyd Itoobiya gaar ahaana taliskii Meles Sanaawi.
Socdaalka raiisal wasaaraha ayaa imaanaya ayadoo wasiirka arimaha dibedda Eritatiya oo Muslim ah uu booqdey Itoobiya halkaas oo uu gudbiyay casuumad uu ka sidey madaxweynaha Eritatiya.
Booqashada Cabi Axmed ayaa dhamaystiraysa siyaasad hufan oo Itoobiya kula dhaqmeyso jaarkeeda, waa lugtii ugu dambeysay oo Cabi Axmed ku dhamaystiro booqashada jaarkiisa.
Itoobiya ayaa raadinaysa inay ka baxdo go’doonka dhinaca badda, booqashadana waxay siinaysaa Itoobiya fursad kale oo u furnaan doonta ganacsigeeda aduunka. Halka Eritatiya iyadna u bilaabmi doono weji cusub. Waa fursad labadoodaba u fiican.
Cabi Axmed Axmed ayaa dareensan in gobolku u baahan yihiin in dadkiisu ku wada noolaado si nabada. Wuxuu dhinaca kale ooda ka qaaday dhamaan wixii ku xirnaa jeelasha Itoobiya oo ah jeelasha ugu xun aduunka.
Isbedelada uu wado Cabi Axmed ayaan ku ekaan doonin booqashooyinka jaarkiisa balse ahaan doona kuwo uu ka sameeyo gudaha dalka sida in aan la jirdilin maxaabiista asagoo kala direy sarkaaladii u qaabilsanaa Itoobiya jeelasha.
Isla maanta ayaa la ogaan doona qorshaha nabadeed ee u dhaxayn doona Itoobiya iyo Eritatiya. Itoobiya ayaa waxa hadda maamula qowmiyada ugu badan dalkaasi oo hore laga ilaalinaya xukunka.